Tag Archive for "असिनापानी" - आज पहाडी भू–भागमा चट्याङ, वर्षा एवं हावाहुरीको सम्भावना !
आज पहाडी भू–भागमा चट्याङ, वर्षा एवं हावाहुरीको सम्भावना !
काठमाडौं । आज देशभरको मौसममा फेरबदल हुने रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । न्यूनचापीय रेखा पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्दै गएकाले आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ । पहाडी भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र हुरीबताससहित हल्का वर्षा एवं तराईमा चट्याङ परिरहेको र असिनापानी पनि पर्न सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । न्यूनचापीय रेखा तापक्रम घटबढका बेला विकसित हुने गर्छ । जसका कारण तराईतिर पानी, च... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सोमबार साझ काठमाडौं उपत्यकासहित देशका केही भागमा मेग गर्जनसहित असिना पानी परेको छ । सोमबार साझ देशको पूर्वी तथा मध्य भू–भाग लगायत पश्चिमका पहाडी भु–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार देशको पूर्वी तथा मध्य भू–भागका थोरै स्थानमा र पश्चिमी पहाडी भू–भागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको भैइरहेको छ । दिउँसो अत्यधिक गर्मि रहेक... थप पढ्नुहोस्
हावाहुरी : पूर्वी तराईका बारा र पर्सा जिल्ला प्रभावित [फोटो फिचर]
काठमाडौं । आइतबार राती आएको हावाहुरीका कारण पूर्वी तराईका बारा र पर्सा जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । बारा र पर्साका विभिन्न ठाउँमा असिनापानीसँगै आएको हावाहुरीबाट हालसम्म ७० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । कलैया, वीरगञ्जलगायतका अस्पतालमा ६०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । उपचारका क्रममा थप केही घाइतेको समेत निधन भएका समाचार आइरहेका छन् । सुरक्षाकर्मी र स्थानीय उद्धारकर्मी रातिदेखि अहिलेसम्म उद्धार... थप पढ्नुहोस्
धनुषा । गएराती हावाहुरीबाट बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा भएको ठूलो धनजनको क्षतिप्रति प्रदेश नं २ को मन्त्रिपरिषद्ले गहिरो दुःख प्रकट गरेको छ । साेमाबार 'आज' बिहानै बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतकका परिवारलाई रु तीन लाख तत्कालिन राहतस्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार राती बारा र पर्साका विभिन्न ठाउँमा असिनापानीसँगै आएको हावाहुरीबाट हालसम्म ७० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । कलैया, वीर... थप पढ्नुहोस्
असिनापानीले धानबाली नष्ट, किसान चिन्तित
डोटी । जोरायल गाउँपालिका–१ घोरडीमा बिहीबार परेको असिनापानीका कारण धानबाली र तरकारी खेती नष्ट भएको छ । असिनापानीले काट्ने अवस्थामा रहेको धानबाली र तरकारी खेती नष्ट गरेको स्थानीयवासी मानबहादुर मल्लले जानकारी दिए । असिनाले पाक्नै लागेको धानबाली र तरकारी पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ । दशैँको मुखमा धानबाली नष्ट भएपछि किसान चिन्तित भएका छन् ।... थप पढ्नुहोस्